सागर चन्द चन्द्रनिगाहपुर (राैतहट), ३० असोज
१२ वर्षअगाडि बम विस्फोट गराएको र २२ जनाको इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले राैतहटकाे क्षेत्र नं. २ बाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई पक्राउ गर्‍याे । सांसद आलम पक्राउ परेपछि रौतहटमा उनका कार्यकर्ताले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंबाट रिर्पोटिङ गर्न रौतहट पुगें २९ असोजमा । चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि स्थानीय पत्रकार अमृत सापकोटासँग सम्पर्क गरें । घटना भएको ठ्याक्कै स्थान मलाई थाहा छैन । तर, सोध्दै जाऊँ,’ सापकोटाले भने ।
सापकोटाले स्थान थाहा नभएको बताएपछि रौतहटका अर्का पत्रकार राकेश यादवलाई सम्पर्क गरें । उनले हामीलाई चन्द्रनिगाहपुरबाट गौरतर्फ आउन सुझाए । चन्द्रनिगाहपुरबाट करिब ३५ किलोमिटर दक्षिण गएपछि हजमिनिया चोक पुगिन्छ । गौर जाने राजमार्गमै रहेको यो चोकमा कांग्रेस कार्यकर्ताले टायर बालेर आलम पक्राउको विरोध गरेका रहेछन् । सडकमा टायर बालेको देखिएपछि थाहा भयो आलमको गाउँ अब नजिकै छ ।
हजमिनिया चोकबाट हामीसँग थपिए राकेश यादव । उनले हामीलाई आलमको गाउँ पुर्‍याउने भए । हजमिनियाबाट कच्ची सडक हुँदै उनले हामीलाई पश्चिमतर्फ लगे ।
बाटोमा उनले हामीलाई सचेत गराए, ‘मधेशको गाउँ गाह्राे छ । केही हुनेवाला भयाे भने म इशारा गर्छु, कुरा बुझ्नुहोला ।’
हस्, भने मैले भनें । मनमा लागेको थियो, ‘के होला र ?’
आलमका भान्जा नाता पर्नेको इँटाभट्टा थियो त्यहाँ । विस्फोटनको दुई वर्षपछि उक्त इँटाभट्टा भत्काएको बताइन्छ ।
आलमको गाउँ अर्थात् तत्कालीन राजपुर गाविस अहिले राजपुर नगरपालिका भएको छ । राजपुर नगरपालिकाको प्रवेशद्वार मानिने फतुवामा पुगेपछि पानी खान रोकियौं ।
सानो चोकमा मान्छेहरूका सशंकित नजर हामीमाथि परे । मैले घाँटीमा क्यामेरा झुण्ड्याएको थिएँ । मान्छेहरू टाढैबाट हामीलाई नियालिरहेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो, हामी कसैको निगरानीमा छौं ।
यादवले संकेत गरिसकेका थिए, यहाँबाट आलमको क्षेत्र सुरू भयो भनेर । उनी भन्दै थिए, ‘जहाँ पायो त्यहीँ फोटो नखिच्नुहोला ।’
कच्ची बाटो हुँदै अलिक अगाडि गएपछि हामी राजपुर पुग्यौं । राजपुर चोकमा पुगेपछि यादवले भने, ‘अमृतजी, तपाईं यतै बस्नुहोस् । हामी गाउँ गएर आउँछौं ।’
अमृतलाई राजपुर चोकमा छाडेर राकेश र म राजपुर नगरपालिका–४ अर्थात् आलमको गाउँ छिर्‍याैं । हाम्रो पछाडि केही मोटरसाइकल लागे । हामीले गति घटाउँदा ती मोटरसाइकलको पनि गति घट्थ्यो । हाम्रो बढ्दा तिनको पनि ।
गाउँ छिर्ने मूल बाटो किनारमा रहेका धान खेत देखाउँदै यादवले भने, ‘इँटाभट्टा भएको ठाउँ ।’
हतारहतार मोटरसाइकल रोक्न लगाउँदै म फोटो खिच्न थालें । आलमका भान्जा नाता पर्नेको इँटाभट्टा थियो त्यहाँ । विस्फोटनको दुई वर्षपछि उक्त इँटाभट्टा भत्काएको बताइन्छ ।
यादव भन्दै थिए, ‘मोटरसाइकलमा बसेरै खिच्नुहोस् ।’
म ओर्लिएर खेतका फोटो खिच्न थालें । पछाडि रहेका मोटरसाइकल बत्तिँदै आए । इँटाभट्टा रहेको स्थानको फोटो खिचिरहेका हामीलाई मोटरसाइकलमा सवार केही मान्छेले सोधपुछ गरे ।
उनीहरूका प्रश्न थिए, ‘को हो ? किन खिचेको ? केका लागि ? कसले पठायो ?’
राकेशले भोजपुरी भाषामै जवाफ दिए । जवाफ पनि राम्रोसँग नसुनी उनीहरू गाउँतर्फ लागे ।
मान्छे जलाइएको भनिएको इँटाभट्टामा अहिले खेती हुन्छ । इँटाभट्टा रहेको खेतको पूर्वी छेउमा अहिले एउटा अर्को इँटाभट्टा सञ्चालनमा छ ।
पश्चिमपट्टिको छेउमा श्री महिला उत्थान प्राथमिक विद्यालय छ । विद्यालयमा टाँसिएको बोर्डअनुसार यो विद्यालय २०६४ सालमा स्थापना भएको हो ।
इँटाभट्टा रहेको स्थानको फोटो खिचिसकेपछि हामी गाउँ छिर्‍याैं । गाउँ छिरेर मोटरसाइकल राम्रोसँग रोक्नै पाएका थिएनौं, हामी घेराबन्दीमा पर्‍याैं । चारैतिरबाट हामीलाई घेरियो ।
‘को हौ ? किन आएको ? कसले पठाएको ?’ भन्दै गाउँलेले प्रश्न गरे । गाउँलेले सोध्ने प्रश्नभन्दा बढी डर प्रश्नकर्ताले समातेका डण्डा र लाठीको लागिरहेको थियो ।
डरैडरमा मैले ठूलो स्वरमा ‘नमस्कार’ भन्दै आफ्नो परिचय दिएँ । साँझको ६ बजिसकेको थियो । सेतो रङको सलवार कमिज र धोतीमा सजिएका लाठीबाजहरूले हामीलाई मोटरसाइकलमै रोके ।
मेरो पाखुरा समाउँदै आलमका छोराले चौरमा लगे । भने, ‘यहीँ कुरा गरौं ।’
नमस्कार गरेको मेरो स्वर सुनेपछि भीड छिचोल्दै एक जना आइपुगे । भीड छिचोल्दै आइपुगेका ती व्यक्तिलाई राकेशले ‘डाक्टरसा ब नमस्कार’ भने । एमबीबीएस पढ्दै गरेका डाक्टरसा ब आलमका छोरा मोहम्मद राहवाज अख्तर रहेछन् ।
अख्तरलाई मैले आफू आउनुको कारण सुनाएँ । बोल्न नपाउँदै भीडबाट एक जना महिला चिच्याइन्, ‘यो सबै मन्त्रीजीलाई फसाउने खेल हो ।’
‘कसरी फसाइएको थियो ?,’ मैले प्रश्न गरें ।
भीड बढेको बढ्यै छ । हातमा लाठी, अनुहारमा आक्रोश र शंका बोकेर चारैतिर मान्छे उभिएका छन् । बालबालिका र महिलाको संख्या पनि बाक्लै छ । आधाभन्दा धेरै मान्छे भोजपुरीमा के के भन्दै थिए । मैले सबै बुझिनँ ।
‘शान्त ठाउँ या कतै बसेर कुरा गर्दा ठीक होला’ आक्रोशित भीड देखेपछि मैले आलमका छोरालाई भनें । तर, उनले मानेनन्, ‘यहीँ कुरा गर्नुपर्छ’ भने उनले । उनको स्वरमा स्वर मिलायो भीडले ।
मेरो पाखुरा समाउँदै आलमका छोराले चौरमा लगे र भने, ‘यहीँ कुरा गरौं ।’
चारैतिर भीडले घेरेको छ । त्यो भीडमा रहेका सबै भन्न थाले, ‘मन्त्रीजीलाई फसाइएको हो । तपाईं पनि फसाउन आएको हो ?’
आक्रोशित भीडका लागि न मसँग प्रश्न छन् न उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ । राकेश मेरो छेउमा निःशब्द उभिएका छन् । उनको अनुहारमा पनि त्रास र भय देखिन्छ ।
जे पर्ला भन्ने लागेर म चौरमा थचक्कै बसें । आलमका छोरालाई पनि बस्न आग्रह गरे । हामी बसेपछि केही अरु मान्छे पनि बसे । बाँकी मान्छेले हामीलाई घेरिरहेकै थिए ।
डायरी, रेकर्डर निकालें । र, पहिलो प्रश्न गरे, ‘के हो यो घटना ?’
‘घटना भएकै छैन । यो विपक्षीको फसाउने खेल हो,’ आलमका भतिजले जवाफ दिए । मैले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ उनी यतिमै सक्थे ।
एक जनालाई प्रश्न गर्दा पनि सामूहिक जवाफ । सबैको जवाफ उही छ, ‘फसाइएको हो ।’
तराईमा अझै गर्मी घटेको छैन । त्यसमाथि चारैतिर भीडले घेरेको छ । निधारमा चिटचिट पसिना आइसक्यो । कोहीकोही मान्छेहरू मैले प्रश्न सोधिरहेको भिडियोसमेत बनाउँदैछन् ।
यदि यो भिडियो कसैगरी सामाजिक सञ्जालमा पुग्यो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ एउटा निरीह पत्रकार । गम्छाले बारम्बार निधारको पसिना पुछिरहेको । डराउँदै प्रश्न गरिरहेको पत्रकार ।
‘अब हमनिके बिदाई करदु,’ राकेशले गाउँलेसँग अनुरोध गरे । उनको आशय थियो, उसलाई (मलाई) अब बिदा गर्दिनुहोस् । छाड्दिनुहोस् ।
तर, मैले एकछिन भन्दै फेरि कुरा गर्न खोजें । आलमका छोराले दिने जवाफ गणितकाे सूत्रजस्तो थियो । जे प्रश्न गरेपछि एउटै जवाफ ।
भीडबाट एकजना वृद्ध आए । उनी रहेछन् अलामका काका शेख फजलिहफ । उनले २०१७ सालदेखि रौतहटमा कांग्रेसले निर्वाचन जित्दै आएको सुनाए । उनी कांग्रेसको गुणगान गाउन थाले । प्रहरी हिरासतमा रहेका आलमको पनि गुणगान गाउन थाले ।
आलमका काका मेरा प्रश्न सुन्दैनन् आफू मात्र बोल्छन् । आफ्नो हरेक बोलीका बीचमा उनी मेरो काँध समाउँछन् । धाप मार्छन् र भन्छन्, ‘यो फसाउने काम हो । षडयन्त्र हो, बुझ्नुभो ।’
षड्यन्त्र शब्द सुनेपछि भीडले ताली पिट्यो । उनी भन्दै गए, ‘चुनावको बेला नाका बन्द हुन्छ, कसरी आउँछ भारतीय मान्छे बम बनाउन ?’
मैले प्रश्न सोधें, ‘तपाईं कांग्रेसको कार्यकर्ता । मन्त्रीजीलाई फसाउन थालेको गाइँगुइँ हल्ला त सुन्नुभयो होला, २०६४ सालमा के भएको हो, केही त थाहा होला ?’
मेरो प्रश्नले उनी भड्किए । ‘घुमाके सवाल करैछी ?’ उनले त्यसपछि नेपालीमै थपे, ‘यो गाउँमा कसैले बम पड्केको सुनेको छैन । बुझ्नुभयो नि ।’ भीडतिर हेर्दै उनले बुझ्नुभयो नि भन्ने शब्दमा जोड दिएका थिए ।
राति ७ बजेतिर चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि होटल साहुले आश्चर्यचकित हुँदै सोधे, ‘सकुशल फर्किनुभयो ?’
‘दुई जना मृतकका परिवारले त किटानी जाहेरी नै दिएका छन् ?,’ मैले सोधेको यो प्रश्नको जवाफ दिन उनले मानेनन् । उनी चुप लागे । भीड फेरि बाेल्यो, ‘यो षडयन्त्र हो ।’
आलमका छोराले फेरि मलाई अलिक पर लगेर कुरा गर्न खोजे ।
‘अब जाऊँ’ राकेशले म तिर हेर्दै भने ।
अलिक पर कुनामा लगेर उनले भने, ‘किटानी जाहेरी दिने मान्छे माओवादीका हुन् ।’
राकेश डराइसकेका थिए । मैले त्यहाँका वडाअध्यक्षलाई भेट्न खोजें । नजिकै रहेका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष शेख अन्सारुलहकसँग कुरा गर्न खोजें ।
मैले प्रश्न गरेकै थिइनँ, आलमका छोराले भनिहाले, ‘सब् कौनो एक हि बात बोल । यी घुमाके सवाल करैछी ।’
त्यसपछि वडाअध्यक्षले पनि जवाफ दिए,‘यो षडयन्त्र हो ।’
हिड्ने बेला भइसकेको थियो । आलमका छोरा छेउमा आएर बोले, ‘राम्रो लेखिदिनुहोला ।’
उनले बिदाइ भन्दै एक प्याकेट मिठाई पनि थमाए ।
हाम्रो मोटरसाइकललाई बीचमा पारेर अगाडि ४ र पछाडि ४ वटा मोटरसाइकल दौडिए ।
मोटरसाइकलमा चढेपछि राजपुर चोकमा पर्खिरहेका सापकोटालाई फोन गरेर भन्यौं, ‘तपाईं हिँड्नुहोस्, हाइवेमा गएर पर्खनुहोस् ।’
एक हुल मोटरसाइकलले हामीलाई राजापुर चोक पुर्‍यायाे । त्यसपछि केही मोटरसाइकल फर्किए । अब बाँकी थिए दुईवटा मोटरसाइकलमा चढेका ३ जना ।
सरकारी नम्बर प्लेटका यी मोटरसाइकलमा सवार थिए, वडा न ५ र ७ का वडाअध्यक्ष ।
ना१ब ३००१ र ना१ब २९७९ नम्बरका सरकारी मोटरसाइकल । वडाअध्यक्ष सवार यी सरकारी मोटरसाइकलले हामीलाई राजपुर नगरपालिकाको सीमा कटाए ।
राजपुर नगरपालिकाको पूर्वी सीमा फतुवासम्म आइपुगेका यी वडाअध्यक्षले पनि उही भाषा दोहोर्‍याएऽ ‘राम्रो लेखिदिनुहोला मन्त्रीजीलाई फसाइएको हो ।’
तीनै जनाको आशय थियो, ‘गाउँमा केही भएकै छैन । त्यत्तिकै पत्रकार आउँछन् ।’
आलमका गाउँका कसैसँग कुरा गर्नै नसकिने अवस्था छ । सबैको एउटै बोली छ । कसैसँग कुरा पो गरिहाल्छन् कि भनेर अगाडि पछाडि मोटरसाइकल लगाएर गाउँ कटाइन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ३०, २०७६, १२:०१:००